Ny hamisavisana ny ratsy… | NewsMada
Ny hamisavisana ny ratsy…
« Fitondrana mpanao bodongerona, mpanao latsak’alina, mpampihorohoro, mpanao hery famoretana, tsy mpanara-dalàna,… ». Izany sy ny hafa tsy voatanisa (misy no tsy azo lazaina eto) no nikilasian’ny olona ity fitondrana ity, taorian’ireny zava-nitranga afakomaly alina, teny Anosipatrana, ireny. Niraraka ny fanaratsiana ity fitondrana ity, tamin’ny alalan’ny fanehoan-kevitra, na tamin’ny fidirana mivantana tamin’ny radio, na tao anatin’ireny tambajotram-pifandraisana (facebook, twitter,…) ireny. Raha tena hampiharina tokoa angamba ilay lalàna vaovao momba ny fifandraisana vao nolanin’ny fanjakana farany teo iny, asa fotsiny… Maro ny ho voasambotra sy hiharan’ny sazy ho manao fanalam-baraka ny fitondrana.
Inona anefa ny mahatonga izany ? Noho ny ataon’ny fanjakana sy ny mpitondra ihany. Leo, tofoka, boboka ny olona matoa mahavita miteny… tafahoatra tahaka izany. Leon’ny ronono an-tavy, leon’ny fampanantenana poakaty, leon’ny fangejana sy ny famoretana, leon’ny fangejana sy ramatahora… Vao mihetsika, hamoahana rezimantana mpitandro filaminana mirongo fiadiana, misaron-tava. Toa ohatra ny hoe : mihetseha eo anie izay mitady e !
Izao anefa, misy fetrany ny fanginana, misy fetrany ny hery sy fahefana eo am-pelatanana. Nisy niseho azy ho nahery, niseho azy ho tsy refesi-mandidy ve nihoatra an-dry Kadhafi, tany Lybia, ry Saddam Hussein, tany Iraka,… ry Moubarak, tany Egypta… He koa ny zava-mitranga, mampirehitra ny ao Afrika amin’izao fotoana izao, raha tsy hilaza afa-tsy izay mitranga ao Mali, Gabon…
Aoka fotsiny, tsy sanatria maniry loza fa mety tsy ho azo ihodivirana ny toy izany, raha izao hatrany ny mbola ho fandehan’ny toe-draharaha samihafa eto amin’ny firenena eto. Ny hamisavisana ny ratsy, hono, hiavian’ny soa e !